Dubat Cali Cameey oo baaq ka soo saaray saameynta abaaraha – The Voice of Northeastern Kenya
Guddoomiyaha guddiga suuq gaynta xoolaha nool ee dalka kana mid ah waxgaradka dowla deegaanka Garissa Dubat Cali Camey ayaa ku baaqay in gargaar deg deg ah loo fidiyo dadka xoola dhaqatada ah ee ay abaarta sida daran u saamaysay waxaa uuna yiri
Dhanka kale wasiirka wasaaradda dowlad wadaajinta Mr. Eugene Wamalwa aya sheegay inaynan wadanku macluul ba’an ka jirin maadaama dallag uu ka buuxo bakhaarada waweyn ee dowladda.
Mr. Wamalwa ayaa xilli uu ku sugnaa ismaamulka Baringo ayaa sheegay inay jiraan 4 milyan oo loorar galeey ah oo loo qeybinayo 12 dowlad deegaan oo ay cunno yari ka jirto.
Waxaa uu intaasi ku daray in dowladda ay ku dadaalayso sidii loo badbaadin lahaa noolosha Kenyaanka kaddib amar ka soo baxay madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta.
Mr. Wamalwa ayaa maamulayaasha dugsiyada ku booriyay inaynan xaafadahooda u dirin ardayda dhigta xarumaha kala duwan saameynta abaarta awgeed
Hadalkan ayuu jeediyay mar uu tagay dowlad deegaanka Isiolo oo cunno laga qeybinayay isagoo sheegay in gargaarkaasi ay sido kale heli doonaan shacabka ku nool ismaamulada kale ee kala ah Samburu, Marsabit, Garissa, Mandera, Turkana , Wajeer, Baringo, Kilifi, Tana River, galbeedka Pokot, Makueni, Kajiado, iyo Kwale.
Wasiirka wasaaradda beeraha Mr. Mwangi Kiunjuri ayaa dhankiisa sheegay in dowladu ay hal bil gudaheed ku dhisi doonto 31 biyo xireeno ah.
Dhawaan ayay ahayd markii is-eedeyn iyo hadal hayn siyaasadeed ay ka dhalatay 21 bilyan oo la sheegay inay dowladu ku bixisay dhisidda biyo xireenada Arror iyo Kimwarer ee Elgeyo Marakwet in kastoo weli baaritaano lagu hayo.
Dadaalada ay dowladu wado waxaa ka mid ah in la caawiyo waayeelada u nugul dhibaatooyinka iyadoo loo qeybinayo lacago labadii biloodba hal mar la siiyo.
Xoghayaha wasaaradda dowlad wadaajinta dalka Mr. Nelson Marwa ayaa digniin adag u diray dadka iyo shaqaalaha bangiyada ee isku daya inay lacagahaasi dano shakhsiyeed u isticmalaan.
Magaalada Kitale ayuu sheegay in lagu qabtay qof waayeel la doonayay in la siiyo 12 kun oo shilin siiyay 4000 oo keliya.
Odayaasha ayuu u soo jeediyay inayna ogolaan in la siiyo raashin oo ay ku adkeystaan in lacago la siiyo si ay ugu iibsadaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay u baahan yihiin.
Waxaa uu wacad ku maray in tallaabo adag laga qaadayo qofkii la ogaado inuu qaatay ama isticmaalay lacag ay dowladu ugu tala galay in la gaarsiiyo qof waayeel ah
← Ciidanka dowlada iyo AL-shabaab oo ku dagaalamay gobolka shabeelada Hoose.
4 eedeysane oo lala xariiriyay lacago faalis ah oo maxkamadda la soo taagay →